Golaha Shacabka oo kalsoonida kala laaban kara RW Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
Golaha Shacabka oo kalsoonida kala laaban kara RW Rooble
Saacadihii la soo dhaafay waxaa xoogeystay guux ku aaddan in Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal ay ku heshiiyeen in Sabtiga xilka laga qado Ra’iisul Wasaare Rooble.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kadib markii Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, uu soo dhaweeyay go’aankii ka soo baxay Maamullada Galmudug iyo HirShabeelle, ayna ku diideen muddo kordhinta loo sameeyay hay’adaha Dowladda, waxaa soo if baxay guux ku aaddan in Aqalka hoose ee Baarlamaanka uu xilka ka qaadi doono Ra’iisul Wasaare Rooble.
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo ayaa qudbaddiisii xalay ku sheegay inuu maalinta Sabtiga ah ee Soo socota uu hor tagi doono Golaha Shacabka, halka Guddoomiyaha Golaha Maxamed Mursal, uu iclaamiyay in xubnaha aqalka Hoose isku yimaadaan Sabtiga.
Kulamo, gooni gooni ah ayay Xildhibaannada aqalka hoose xalay ilaa maanta ku yeelanayaan Muqdisho, waxaana socda olaha la doonayo in Xildhibaannadii muddada u kordhiyay Farmaajo ay xilka ka qaadaan Rooble.
Xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa faraha ka bixi karta haddii Golaha Aqalka hoose, qeybta taabacsan Madaxtoyada ay kalsoonida kala laabtaan Ra’iisul Wasaaraha, waxaana mar kale qarxi kara dagaallo lagu riiqmo oo ka curta Caasimadda.
Sida ay xaqiijinayaan ilo xog ogaal ah, Guddoomiyaha Aqalka hoose, Mursal, ayaa labo kulan oo kala duwan maanta la yeeshay Xildhibaannada ay isku aragtiyihiin, waxaana laga wada hadlay, wixii ka soo baxay kulankii xala dhex maray Mursal iyo Farmaajo oo ka dhacay Madaxtooyada.
Mucaaradka ayaa dhankooda muujiyay walaac xooggan oo la xariira arrintaan, Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Candishakuur Warsme, ayaana Golaha gaga digay in ay ku dhaqaaqaan tallaabo kale oo abuuri karta kala fogaansho siyaasadeed oo mar kale iyagu masuul ka yihiin.